ch 18 မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 18 မဿဲ
18:1 ထိုခဏခြင်း, တပည့်ယရှေုအားချဉ်း ကပ်., ဟုဆို, "သင်ကောင်းကင်ဘုံ၏နိုင်ငံတော်၌ သာ. ကြီးလိမ့်မည်ဘယ်သူကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါ?"
18:2 ထိုအခါယရှေု, မိမိကိုမိမိတစ်ဦးသူငယ်တောင်းဆိုထား, သူတို့အလယ်၌သူ့ကိုတင်လိုက်တယ်.
18:3 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: "အာငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သင် ပြောင်းလဲ. သူငယ်ကဲ့သို့ဖွစျမဟုတ်လျှင်, သငျသညျကောငျးကငျနိုငျငံတျောသို့ဝငျရလိမ့်မည်မဟုတ်.
18:4 ထို့ကြောင့်, အကြင်သူသည်ဤသူငယ်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိနှိမ့်ချကြပါပြီလိမ့်မည်, ထိုကဲ့သို့သောတစ်သညျကောငျးကငျနိုငျငံတျော၌ သာ. ကြီးမြတ်၏.
18:5 အကြင်သူသည်ငါ၏နာမကိုတဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောသူငယ်ကိုလက်ခံရကြလိမ့်မည်, အကြှနျုပျကိုလက်ခံ.
18:6 အကြင်သူသည်လမ်းလွဲသည်ဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုဦးဆောင်ကြပါလိမ့်မယ်, ငါ့ကိုခိုလှုံသောသူသည်, သူ့ကိုသူ၏လည်ပင်း၌ဆွဲထားကြီးစွာသောကြိတ်ဆုံကျောက်ရှိသည်ဖို့အတှကျကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်, နှင့်ကျနဲသောပငျလယျထဲမှာနစ်မြုပ်ခံရဖို့.
18:7 လမ်းလွဲကလူကိုဦးဆောင်မယ့်ကမ္ဘာမင်္ဂလာရှိ၏! သှေးဆောငျမှုပျေါပေါကျဖို့အတှကျလိုအပျသညျ့ဖြစ်သော်လည်း, သို့ရာတွင်: သွေးဆောင်မှုပေါ်ပေါက်ဘယ်သူကိုမှတဆင့်သောလူသားမှမင်္ဂလာရှိ၏!
18:8 ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လက်သို့မဟုတ်သင်၏ခြေကိုအပြစ်တရားမှစုကိုသင်ဦးဆောင်ပါလျှင်, ကိုဖြတ်နှငျ့သငျကနေပစ်ပယ်. သငျသညျကိုပိတ်ထားသည်ဘဝသို့မဟုတ်ခြေဆွံ့ထဲသို့ဝင်သည် သာ. ကောင်း၏, နှစ်ခုတို့သည်လက်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုခြေဘဝါးရှိခြင်းထာဝရမီးထဲသို့လှေတျတျောမူခံရဖို့ထက်.
18:9 နှင့်သင့်မျက်စိအပြစ်တရားမှစုကိုသင်ဦးဆောင်ပါလျှင်, အမြစ်ကအထဲကနှငျ့သငျကနေပစ်ပယ်. သင်တဦးတည်းမျက်စိနှင့်အတူအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသည် သာ. ကောင်း၏, နှစ်ခုသောမျက်စိ ရှိ. ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ၏မီးသို့စလှေတျခံရဖို့ထက်.
18:10 သငျသညျတပင်ကိုမျှဤသူငယ်၏ခြင်းကိုမထီမဲ့မြင်မပြုပါကမှကြည့်ရှုပါ. အကြောင်းမူကား, ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သူတို့၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နေ့တိုင်းအစဉ်ငါ့ခမည်းတော်၏မျက်နှာပေါ်မှာကြည့်ရှုကြောင်း, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်.
18:15 သို့သော်သင်၏အစ်ကိုကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်လျှင်, သူ့ကိုသွားနှင့်ပြင်ဆင်ရန်, သင်နှင့်တစ်ဦးတည်းကသူ့ကိုအကြား. သူသည်သင်တို့စကားကိုနားထောင်လျှင်, သင်သည်သင်၏အစ်ကိုပြန်ပါပြီလိမ့်မယ်.
18:16 သို့သော်သူသည်သင်တို့စကားကိုနားမထောင်ကြလိမ့်မည်ဆိုပါက, သင်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနှစ်ခုနှင့်အတူဖိတ်ခေါ်, တိုင်းစကားလုံးနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုမျက်မြင်သက်သေများ၏နှုတ်ဖြင့်ရပ်တည်စေခြင်းငှါဒါ.
18:17 ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုနားမထောင်ကြပါလျှင်, အသင်းတော်ပြောပြ. သို့သော်သူသည်ဘုရားကျောင်းနားမထောင်ကြပါလျှင်, သူ့ကိုအယူမှားနှင့်အခှနျခံကဲ့သို့သင်တို့မှဖြစ်ပါစေ.
18:18 အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သငျသညျမွကွေီးပျေါမှာခညျြနှောငျခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်သမျှ, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူကိုလည်းခညျြနှောငျခံရကြလိမ့်မည်, သမျှကိုသင်သည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြန့်ချိခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူကိုလည်းဖြန့်ချိရကြလိမ့်မည်.
18:19 နောက်တဖန်သင်တို့ကိုငါဆိုသညျကား, သငျတို့တှငျသူတို့၏အမျိုးအလျှင်နှစ်ခုမွကွေီးပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့ကြပြီ, သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ပြီသမျှဘာမှအကြောင်းကို, ငါ့ခမညျးတျောသဖြင့်ထိုသူတို့အဘို့ပြုရမည်, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်.
18:20 နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုငါ၏နာမ၌စုဝေးနေကြသည်ရာ၌, အဲဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို, သူတို့ရဲ့အလယ်၌။ "
18:21 ထိုအခါပေတရု, သူ့ကိုနီး drawing, ကပြောပါတယ်: "သခင်, ဘယ်လောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာငါ့အစ်ကိုအပြစ်တရားသည်ငါ့ကိုဆန့်ကျင်ကြမည်, ငါသူ့ကိုခွင့်လွှတ်? တောင်မှခုနစ်ကြိမ်?"
18:22 ယရှေုကလညျး: "ငါသည်သင်တို့အားမဆို, ပင်ခုနစ်ကြိမ်, ဒါပေမယ့်ပင်ခုနစ်ဆယ်ကြိမ်ခုနစ်ကြိမ်.
18:23 ထို့ကြောင့်, ကောငျးကငျနိုငျငံတျောရှငျဘုရငျကိုသူတစ်ဦးသည်လူနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်, သူ၏ကျွန်တို့အကောင့်ကိုယူလိုသူ.
18:24 ထိုမင်းသည်အကောငျ့ကိုယူပြီးစတင်နေပြီပြီးမှ, တဦးတည်းသူ့ကိုတသောင်းခွက်အကြွေးသောသူသို့ဆောငျခဲ့.
18:25 ဒါပေမယ့်သူကပြန်ဆပ်ဖို့မဆိုလမ်းရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ကတည်းက, မိမိအရှင်ကိုရောင်းချခံရဖို့သူ့ကိုအမိန့်, သူ၏ဇနီးနှင့်ကလေးများနှင့်အတူ, သူရှိခဲ့ကြောင်းနှင့်အားလုံး, ဒါကြောင့်ပြန်ဆပ်နိုင်ရန်အတွက်.
18:26 ဒါပေမယ့်ကျွန်, ထိ မိ. လဲမှောက်ရက်, သူ့ကိုတောင်းပန်, ဟုဆို, 'ငါနှင့်အတူသည်းခံခြင်းဖူး, ငါသည်သင်ဖို့ကအားလုံးပြန်ဆပ်ပါလိမ့်မယ်။ ''
18:27 ကျွန်၏ထိုအခါအရှင်သည်, မသနားနှင့်အတူပြောင်းရွှေ့ခံရ, သူ့ကိုပြန်လွှတ်, သူသည်မိမိကြွေးမြီတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူ.
18:28 ဒါပေမယ့်ကျွန်ထွက်သွားသောအခါ, သူ့ကိုတရာဒေနာရိတစ်ပြားကြွေးတဲ့သူကျွန်ချင်းတယောက်ကိုတွေ့. ထိုအခါသူ့ကိုကိုင်ယူပြီး, သူ့ကိုဆို့, ဟုဆို: '' သငျသညျအဘယျသို့ကြွေးဆပျ။ ''
18:29 နှင့်သူ၏ကျွန်ချင်း, ထိ မိ. လဲမှောက်ရက်, သူ့ကိုအသနားခံ, ဟုဆို: 'ငါနှင့်အတူသည်းခံခြင်းဖူး, ငါသည်သင်ဖို့ကအားလုံးပြန်ဆပ်ပါလိမ့်မယ်။ ''
18:30 ဒါပေမဲ့သူဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့. အဲဒီအစား, သူ ထွက်. ထောင်ထဲမှာသူ့ကိုလှေတျတျောမူခဲ့, သူကအကြွေးပြန်ဆပ်မယ်လို့သည်အထိ.
18:31 အခုကျွန်ချင်း, အမှုအရာကိုမြင်လျှင်, ကိုအလွန်ဝမျးနညျးခဲ့ကြ, ထိုသူတို့ပြုဘူးခဲ့သမျှသော သွား. မိမိတို့အရှင်အစီရင်ခံတင်ပြ.
18:32 ထိုအခါမိမိအရှင်ကိုသူ့ကိုခေါ်တော်, သူကသူ့ကိုအားဆို၏: '' သင်ကကျွန်ဆိုး, ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်တို့၏ကြွေးမြီတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူ, သငျသညျအကြှနျုပျကိုတောင်းပန်သောကြောင့်,.
18:33 ထို့ကြောင့်, သင်သည်လည်းသင်၏အခငျြးကိုယျတျော၏ကြှနျအပျေါသနားကွပွီမထားသင့်, ငါသည်သင်တို့ကိုသနားခဲ့သကဲ့သို့?''
18:34 မိမိအရှင်, အမျက်ထွက်ဖြစ်ခြင်း, အနှိပ်စက်ဖို့သူ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်, သူတစ်ခုလုံးကိုကြွေးမြီဆပ်မှီတိုင်အောင်,.
18:35 ဒါကြောင့်, လွန်း, ငါ၏အကောင်းကင်ခမည်းတော်သည်သင်ပြုရမည်, သငျသညျတစျဦးစီသင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုနေသူ့အစ်ကိုခွင့်လွှတ်မည်မဟုတ်ပါ။ "